आत्मसमर्पण गर्न आएका तालिबानलाई यु'द्धमा फर्काउने अमेरिकाको गति कस्तो छ? - Himali Patrika
आत्मसमर्पण गर्न आएका तालिबानलाई यु’द्धमा फर्काउने अमेरिकाको गति कस्तो छ?
हिमाली पत्रिका ३१ साउन २०७८, 4:58 pm
अफगानिस्तानमा सदियौं देखि, जब कुनै प्रतिद्व’न्द्वी समूह सत्तामा आँउथ्यो, पराजित समूह अर्को कम शक्तिशाली, या अन्य कुनै शक्तिविहीन समूहसँग आत्मसमर्पण गर्दै एकिकृत भएर नयाँ शक्ति निर्माण गर्दथ्यो। जसरी हामी हाम्रा छिमेकीहरुसँग साथै बस्नका लागि गर्छौं। यो कुनै फुटबल खेल जस्तो होइन, खेल सकिएपछि पराजित समूहले शहर छाडेर अन्यत्र लागे हुन्छ। हामीलाई सम्झन मुस्किल हुनसक्छ, अमेरिकाले “सिविल वार” पछि आफ्नो भूमिमा कुनै दीर्घकालीन यु’द्ध गरेको छैन।
जब तालिबान आ’त्मसमर्पण गर्न आए, त्यसबेला अमेरिकाले तिनीहरुको प्रस्ताव स्वीकार गरेन। यो कुरा अफगानिस्तान यु’द्धकाबारे खोजमूलक “No Good Men Among the Living.”, पुस्तकमा आनन्द गोपालले लेखेका छन्।
बुश प्रशासनका लागि पूर्ण विनाश गर्दा नै फाइदा हुन्थ्यो। तिनीहरु धेरै भन्दा धेरै आत’ङ्कवादी फेला परुन् भन्ने चाहन्थे। समस्या यो थियो कि पाकिस्तानमा गएर वा पुनः नागरिक जीवनमा मिसिएर तालिबानले लडाई रोकिसकेको थियो। अल कायदा पक्षका सदस्यहरुलाई भने औंलामा गन्न सकिने अवस्था बनिसकेको थियो।
तर सजिलै छ: कुरा के भने अमेरिकीसँगै काम गरिरहेका अफगानहरुले आफ्ना सैन्य प्रायोजकहरुको अवस्था बुझेर तिनीहरुले आतङ्क’वादीहरुबारे बढाइचढाइ गरे। अमेरिकीहरुले सूचना दिनेलाई नगद दिने भनेपछि तालीवान लडाकूको हत्या वा गिरफ्तारी बढ्यो। एक्कासी चारैतिर तालिबान देखाइन थालिए। हिंसाले उग्ररुप लिन थाल्यो।
अब के थियो, कुनै छिमेकी आफ्नो छिमेकीलाई यो तालीवानको सदस्य हो भन्दै मार्न सक्थ्यो वा अमेरीकीले भन्ने गरेजस्तै ग्वान्तानामो पठाउने सक्थ्यो।
ढोका फूटाएर पस्दा पनि प्रश्न गर्न पाइदैनथ्यो। त्यस घरको मान्छेका अघि अति भाग्यशाली यु’द्धसरदार उभिरहेको हुन्थ्यो र उसका सम्पत्ति उठाएर लान्थ्यो। “हामी पुन राष्ट्रनिर्माण गरिरहेका छैनौ,”। ठीक हो, हामी पनि त यस्तो कहिल्यै थिएनौ यदि दुबइको अर्थबजारमा नगद नलुटिएका र गगनचुम्वी भवनहरु नबनाइएका भए।
आत्मसमर्पणको प्रयाशका केही वर्षपछि पनि, तालीवानीहरुका आत्मसमर्पणका प्रयाशहरुलाई बार-बार अस्वीकार गरिए। तब पुराना तालिबानले फेरि ब’न्दुक उठाउन बाध्य भए। जुनबेला उनीहरु सत्तामा थिए, त्यसवेला जनताहरु सत्ताच्यूत भएको हेर्न चाहन्थे। अमेरिकाले नै उनीहरुलाई पुन लोकप्रिय हुने चाँजोपाँजो मिलाइदिए।
सन् 2008 को राष्ट्रपति चुनावी अभियानमा उदारवादीहरुले भने ‘अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई “ध्यान नदिएको” भए हुन्थ्यो – वास्तवमा, सैनिकहरु उपस्थित नभएका केही मागमा मात्र शान्ति छ, अफगान सरकारले आतङ्कको सामना गर्नु परिरहेको छैन’। कुरा यस्तै नै थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति बराक ओबामा आए तर उनले सेना वापसी हुने घोषणा गर्दै सेनाको स्तरलाई वृद्धि गर्न थाले। अविश्वसनीय गुप्तचरको सूचना व्यवस्थामा आधारित रात्री युद्ध तथा छापा मार्ने कार्यलाई जोड दिए।
अचेल ट्रम्प भन्छन्-उनीसँग एक नयाँ र बकाइदाको रणनीति छ। उनी भन्छन्- पाकिस्तानलाई अलग गरेर होइन बढी भन्दा बढी सहभागी गराउनु आवश्यक छ। तर प्रष्ट छ, पाकिस्तानको गुप्तचर सेवा नै दशकौदेखि तालिबानलाई सहयोग पुर्‍याइरहेकोछ।
गोपालको यो पुस्तक यु’द्ध कसरी संचालन भइरहेको छ भन्ने यथार्थ विवरण हो। यो उपन्यास जस्तो छ। यो तीन जना अफगानीहरुको वास्तविक कर्तुतनामा हो, जो यु’द्धकै कारण ऐय्यासी जीवन जिइरहेका छन्। ती हुन्- एक अमेरिकी आ’क्र’मणका समर्थक सरदार, एक तालिबान कमाण्डर र एक गृहिणी। म अनुरोध गर्छु- यो पुस्तक ट्रम्पले पढुन्। यस पुस्तकले राष्ट्रपतिसँग भएको “नयाँ र बकाइदाको रणनीति”बाट गरिने युद्ध विरुद्ध गम्भीर चेतावनी दिन्छ।
यो एक पाना भन्दा धेरै छ। तर उनका सलाहकारहरुलाई मेरो अनुरोध छ कि ट्रम्पले पचाउन सक्नेजति मात्र सुनाइदिनुहोला।
अन्तमा बाँकी कुरो, उनी जुन कुरा चाही रहेकाछन्, त्यो अफगानिस्तानको खनिजहरु हो। सबैले बुझेका छन् – अमेरिकाले त्यही माथि गिद्धे दृष्टि राखेको छ।
खर्च वर्षाएपछि अफगानिस्तानका खानीहरु हराभरा हुन्छ भन्ने ट्रम्पले सोचेका छन् भने – उन्ले शुरुमै एक वास्तविकतामाथि विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ: हामीले एक पटक आत्मसमर्पण गर्न आएको एउटा शत्रुबाट अबको युद्धमा हार खाइरहेका छौं। अफगानिस्तानका खनिजहरु हत्याउनु त्यति सजिलो छैन।
(दी इन्टरसेप्ट नामक अनलाइनबाट साभार। लेखक यस अनलाइनका डि सि व्युरो प्रमुख हुन्। उनको This is your country on drugs: The secret history of getting high in America नामक पुस्तक ज्यादै ख्याति पाएकोछ।)